YEYINTNGE(CANADA): ရှစ်ဆယ့်ရှစ် နဂ္ဂတစ်များ (၂)
ကြာသပတေးနေ့၊ သြဂုတ်လ 07 2008 09:42 - မြန်မာစံတော်ချိန်
အားလုံး၏ မျက်နှာတွေက စိတ်ထက်သန် တက်ကြွမှုဖြင့် အရောင်ထွက်နေသလော ထင်ရသည်။ ရဟန်းသံဃာတော်တွေ ကလည်း အများအပြား။ အလံတို့ကလည်း တလူလူ။ ကမ္ဘာမကြေ သီချင်းသံက တပျံ့ပျံ့။ တို့အရေး တို့အရေး ဟူသော ကြွေးကြော်သံ တွေကလည်း တခဲနက်။ မဟာဗန္ဓုလလမ်း ပေါ်ရှိ ဧမာနွေလ ဘုရားကျောင်း နားမှနေ၍ သည်မြင်ကွင်းကို သူ တပြန့်တပြော မြင်နေရသည်။ သည်မျှနှင့် အားမရသည့်အဆုံး သူ အဖေ့ကို ချီခိုင်းသည်။ ကလေးအရွယ်သာ ရှိသေး၍ သူ့ရှေ့တွင် လူတို့က ပိတ်ဆို့ကာဆီး နေသော ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ည ကိုးနာရီ ကျော်လောက်တွင်တော့ အဖေ က ပြန်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ လေထုထဲတွင် ပျံ့နှံ့စ ပြုနေပြီ ဖြစ်သော တစုံတရာကို ၁၉၆၂ ခုနှစ် ၇ ဇူလိုင် အရေးအခင်း ကို တွေ့ကြုံ ဖြတ်သန်း ခဲ့ရသည့် အဖေ ရရှိနေသောကြောင့် ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ အန္တရာယ် ၏ အငွေ့အသက်... ဟုတ်သည်။ အန္တရာယ် ၏ အငွေ့အသက် တို့က လေထုထဲတွင် ပျံ့နှံ့နေခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
ထိုည ဆယ့်တနာရီ လောက်တွင် သူ အိပ်ရာ ဝင်ခဲ့သည်။ သို့သော် သူ အိပ်မပျော်။ တစ်နေ့လုံး တွေ့မြင်ခံစား ခဲ့ရသည့် အရောင်များ၊ အရိပ်များ၊ အသံများ က သူ စားမြုံ့ပြန် ဖို့အတွက် ခမ်းနား ကြီးကျယ်လွန်းနေသည်။ ည ၁၂ နာရီ ထိုးခါနီးတွင်တော့ ခပ်ဝေးဝေးမှ မသဲမကွဲ အသံဗလံများ သူ ကြားရသည်။ ဘာသံတွေပါလိမ့်…အိပ်ရာမှ သူ ငေါက်ခနဲ ထထိုင်သည်။ အောက်ဆင်းပြီး ဝရန်တာဆီ သွားမည်လုပ်တော့ အဖေ က သူ့ကို လှမ်းတားသည်။ နောက်တော့ ဝရန်တာမှ ခေါင်းပြူမထွက် ရန် ပြောပြီး သားအဖ နှစ်ယောက် ဝရန်တာတွင် ရပ်ကြည့်ကြသည်။ ၁၂ နာရီ ၁၅ လောက်တွင် အနော်ရထာ လမ်းဘက်ဆီမှ လူတစု ဗိုလ်တထောင်ဘက်ဆီသို့ ဦးတည်ပြေးလာ ကြတာ သူ တွေ့ရ သည်။ "ပစ်တယ်ဟ ပစ်တယ်ဟ ခွေးမသားတွေ တကယ်ပစ်တယ်" ဆိုသော စကားသံကိုလည်း သူ ကြားရသည်။ ည တနာရီ ခန့်တွင်မှ ပြေးလွှားသူများ စဲသွားသည်။ ထိုအချိန်ကျမှ သူ အိပ်ရာဝင်ခဲ့ ပါသည်။
ကိုးရက်နေ့ မနက်တွင်တော့ ည က ပစ်ခတ်နှိမ်နင်း ခဲ့မှုကြောင့် မြို့လယ်တွင် ဆန္ဒပြပွဲ များ ကျဲပါး နေခဲ့သည်။ ထိုနေ့တွင် ဆန္ဒပြပွဲ အများစု ဖြစ်ပွားသည်က တောင်ဥက္ကလာ၊ မြောက်ဥက္ကလာ နှင့် သာကေတ အစရှိသော မြို့ပြင် ရပ်ကွက်များတွင်( ထိုစဉ်က အနေနှင့် ဖြစ်သည်)။ တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ နှင့်မူ မြို့ပေါင်း ၄၀ အထိ ဆန္ဒပြပွဲ များ ပျံ့နှံ့ သွားခဲ့သည်။ ထိုနေ့အတွက် အပြင်းထန် ဆုံး ပစ်ခတ်မှုမှာ စစ်ကိုင်းမြို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ စစ်ကိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှ စက်သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်မှု ကြောင့် လူပေါင်း ၃၀၀ သေဆုံးခဲ့ရသည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင်လည်း ပစ်ခတ်မှု များက ကြိုကြားကြိုကြား ဆက်လက် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ညပိုင်းတွင်မူ သူတို့ မိသားစု ရေဒီယို နားမှ မခွာကြတော့။ ဘီဘီစီ၊ ဗီအိုအေ တို့မှ ထုတ်လွှင့်သော သတင်းများကို အငမ်းမရ နားထောင်ကြရ လေသည်။ ဆယ်ရက်နေ့ တွင်တော့ လူထု ၏ အမျက်ဒေါသက လောင်ကျွမ်း ပေါက်ကွဲ ခဲ့ရပြီ ဖြစ်သည်။ ဘရင်းကယ်ရီယာ များပေါ်မှ ရက်ရက်စက်စက် ပစ်ခတ်နေသော စစ်သားများအား ဓားများ၊ ဂျင်ဂလိများ အသုံးပြု၍ ပြန်လည် တိုက်ခိုက်ကြတော့သည်။ အဆိုးဆုံး ဖြစ်ရပ် တခုကလည်း ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး တွင် ဖြစ်ပွား ခဲ့သည်။ မွန်းလွဲ တနာရီ ခန့်တွင် စစ်ကားတစီးမှ ဆေးရုံကြီး ထဲရှိ သူနာပြုများကြားသို့ ပစ်ခတ် သဖြင့် လူ အချို့ သေဆုံးခဲ့ရ ခြင်းဖြစ်သည်။ ညနေ အဖေ ရုံးမှ ပြန်ရောက်လာတော့ သတင်းတခု သူ ကြားရပြန်သည်။ မြောက်ဥက္ကလာတွင် ဒေါသထွက်နေပြီ ဖြစ်သော လူထုကြီးက ရဲတပ်သား အချို့ အား ခေါင်းဖြတ် သတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
၁၂ ရက်နေ့တွင်တော့ နိုင်ငံတော် သမတ ဦးစိန်လွင် ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်ကြောင်း သတင်းကို မြန်မာ့ အသံ မှ ကြေညာလိုက်လေသည်။ အပြီးသတ်အောင်ပွဲ မဟုတ်သေးသော်လည်း သူ အပါအဝင် ပြည်သူအများ ပျော်ရွှင် ခဲ့ကြရသည်။ သည့်နောက်ပိုင်း ရက်များတွင်တော့ ဆန္ဒပြပွဲများ နေ့စဉ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး သြဂုတ်လ တတိယပတ်တွင် သမတသစ်အဖြစ် ဒေါက်တာမောင်မောင် တက်ရောက် လာသည်။ "၁၄ နှစ်ဆိုတာ (၁၉၇၄ အခြေခံဥပဒေ ကို ရည်ညွှန်းသည်) သမိုင်းအနေနဲ့ ဆိုရင် မနေ့ တနေ့ကပါ" ဟု အစချီကာ တပါတီစနစ် သို့မဟုတ် ပါတီစုံ စနစ် ကျင့်သုံးရန် ဆန္ဒခံယူပွဲ ပြုလုပ် ပေးမည်" ဟု နိဂုံးချုပ်သည်။ ထိုရက်များ အတွင်း ဆန္ဒပြပွဲ များက နေ့စဉ်ဖြစ်ပွား ခဲ့လေသည်။ သြဂုတ် လ ၂၄ ရက်နေ့တွင်တော့ မာရှယ်လောကို ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။ သြဂုတ်လ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ရွှေတိဂုံဘုရား အပြင်ဘက်၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ပြည်သူလူထု အား မိန့်ခွန်းပြောသည်။ သြဂုတ်လ ကုန်ပိုင်းလောက်တွင်တော့ တနိုင်ငံလုံး လူထုလူတန်းစား အသီးသီး ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် များနှင့် အဆိုတော်များပါ မကျန် အထွေထွေ သပိတ်ထဲသို့ ပါဝင်ခဲ့ကြပြီ ဖြစ်သည်။ လမ်းစဉ်ပါတီ ဝင်များ ပါတီမှ အစုလိုက်အပြုံလိုက် နှုတ်ထွက်ကြပြီး ဝန်ထမ်းပေါင်းစုံ ပါဝင်လာပြီ ဖြစ်သော သပိတ် ကြီးက အစိုးရ အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရား ကို လုံးဝ ရပ်ဆိုင်း ပစ်လိုက်သည်။
ထိုကာလ အတောအတွင်းတော့ သူတို့ ရပ်ကွက်များတွင် အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရား ပျက်ပြားနေပြီ ဖြစ် သဖြင့် အဖျက်အမှောင့် လုပ်ရပ်များ မပေါ်ပေါက်နိုင်စေရန် လမ်းလုံခြုံရေးကို ရပ်ကွက်ထဲရှိ လူငယ် များနှင့် စုဖွဲ့ထားရ လေသည်။ လမ်း ဟိုဘက်ထိပ် သည်ဘက်ထိပ် တွင် ဝါးကပ်များဖြင့် ကာရံကာ လူ အဝင်အထွက်ကို စစ်ဆေးရသည်။ ည ဘက်တွင်လည်း အလှည့်ကျ ကင်းစောင့်ကြရသည်။ သူတို့ မြို့ထဲရှိ ရပ်ကွက်များတွင်တော့ မည်သည့် ပြဿနာမျှ ထူးထူးခြားခြား မဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သူ မှတ်မိ နေပါသည်။ နောက်ထပ် သူ မှတ်မိနေသည်က အစိုးရပိုင် စတိုးဆိုင်များ (ပဒုမ္မာစတိုး ဟု သူ ထင်သည်) မှ ပစ္စည်းများကို လမ်းဘေးတွင် ချရောင်းကြတာ ဖြစ်သည်။ သူတို့လို သာမန် ပြည်သူ လူထု ဝယ်ယူခွင့် မရှိသည့် ပစ္စည်းများ၊ စားသောက်ကုန်များ၊ အသုံးအဆောင်များ ဖြစ်သည်။ သုတ ရတနာသိုက် ဟု အမည်တွင်သော ကလေးများအတွက် ဖတ်ရှုစရာ စာအုပ် အကောင်းစားများ ကိုလည်း သည်တော့မှပင် သူ ဖတ်ရှုဖူးတော့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
စက်တင်ဘာလ ပထမပတ်တွင် အစိုးရ ရုံးဌာန အသီးသီးက ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းသမဂ္ဂများကို ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြသည်။ သူ့ ဖခင်၏ ရုံးတွင်လည်း ဝန်ထမ်းသမဂ္ဂ ကို သူ့ ဖခင်မှ ဥက္ကဌ တာဝန်ယူကာ ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်။ သည်မှာပင် သူလည်း သူ့ဖခင်နှင့် နေ့စဉ်ရက်ဆက် လိုက်၍ ဆန္ဒပြဖြစ်သည်။ သူ့ ဘဝတွင် ပထမဆုံး အကြိမ် အဖြစ် လူထုတိုက်ပွဲ တွင် ပါဝင်ဖူးခြင်း။ သူ့ အရွယ် လူမမယ်ကျောင်းသား ငယ်ကလေးများ ကိုလည်း ဆန္ဒပြစစ်ကြောင်းများ ထဲတွင် သူ တွေ့ရသည်။ သံဃာတော်များ၊ သီလရှင် လည်းပါသည်။ မိတ်ကပ် အလှဖန်တီးရှင် များလည်းမကျန်။ အိမ်ရှင်မများ သမဂ္ဂ (ဒေါက်တာ မောင်မောင် က ဆန္ဒပြသူ များတွင် အိမ်ရှင်မများ မပါဝင်သေးကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်) မှ သူ့ အမေအရွယ် အမျိုးသမီး များကိုလည်း သူ တွေ့ရသည်။ ထို အချိန်တွင် ပြည်သူပိုင် သတင်းစာ များကလည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဖော်ထုတ်ရေးသား နေကြပြီ ဖြစ်သည်။ လုပ်သား၊ ကြေးမုံ၊ ဗိုလ်တထောင် စသည်…။ ပြင်ပတွင် နေ့စဉ် ထုတ်ဝေနေသော ဂျာနယ် များကလည်း သူ့ စိတ်ထင် ဆယ့်ငါးမျိုး အမျိုးနှစ်ဆယ် ရှိသည်။ ဒို့အရေး ဂျာနယ် စသဖြင့်။ သမတရုံ ၏ နဖူးစည်းတွင် WE WANT DEMOCRACY ဟူသော စာတန်းကြီးအား အနီရောင် ဖောင်းကြွ စာလုံးများဖြင့် ရေးထိုး ထားတာလည်း သူ မှတ်မိသည်။ တရက်တွင်တော့ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးနု က စင်ပြိုင်အစိုးရ ဖွဲ့စည်းကြောင်း ကြေညာသည်။ ထိုနေ့ ညနေဘက်တွင် သူ ပန်းဆိုးတန်း သို့ ရောက်ရှိနေသည်။ ညနေ လေးနာရီ ခန့်တွင်တော့ သူ တခါမှ မတွေ့ဖူးသေးသော ဆန္ဒပြ စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်း ကို သူ တအံ့တသြ တွေ့ရှိ ရလေသည်။ တပ်မတော်ယူနီဖောင်း များကို ဝတ်ဆင်လျက်။ တပ်မတော်(လေ) မှ စစ်သည်များ။ ပြည်သူ့တပ်မတော် တို့တပ်မတော် ဟူသော လူထုကြီး၏ ကောင်းချီးပေးမှု အောက်တွင် သူလည်း ပျော်ဆင်းသွားသည်။ လမ်းဘေးမုန့်ဆိုင် မှ ပူတင်းပေါင်မုန့် တထုပ်ကို သူ ကမန်းကတမ်း ပြေးဝယ်သည်။ ထို့နောက် စစ်သည်တဦး လက်ထဲသို့ သူ ထည့်လိုက်သည်။ ဘောင်းဘီတို နှင့် ကောင်လေးတစ်ယောက်…. တပ်မတော်(လေ)မှ စစ်သည်တဦး…. ပန်းဆိုးတန်း လမ်းမထက်တွင်….။ စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့ ဖြစ်ပါသည်။
ထို့နောက်ပိုင်း ရက်များတွင်တော့ ပြည်သူ့ရဲ များကပါ ဆန္ဒပြပွဲ၌ ပူးပေါင်း ပါဝင်လာကြသည်။ ပြည်သူ လူထုက အစိုးရ နှုတ်ထွက်ပေးရန် နှင့် ကြားဖြတ်အစိုးရ ဖွဲ့စည်းပေးရန် တောင်းဆိုလာသည်။ အစိုးရ က ငြင်းဆန်ခဲ့သဖြင့် ဆန္ဒပြပွဲ များ၏ အရှိန်အဟုန်က ပိုမို ပြင်းထန်လာသည်။ အချိန်က စက်တင်ဘာ တတိယပတ်ထဲတွင်။ ကြားဖြတ် အစိုးရ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း မရှိပါက ရန်ကုန်မြို့ရှိ စစ်ရေး ပစ်မှတ်များကို လေတပ် မှ ဗုံးကြဲ ၍ ရေတပ် မှ အမြောက်ဖြင့် ပစ်မည် ဟူသော ကောလဟလ ကလည်း ထွက်ပေါ် လာသည်။ တပ်မတော် တခုလုံးကို မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီ မှ နှုတ်ထွက်ခွင့် ပြုလိုက်ကြောင်း ကြေညာသည်။ ကြေညာပြီး နှစ်ရက်မျှသာ ကြာပါသည်။ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ ညနေ လေးနာရီ ခန့်တွင် ရေဒီယိုမှ စစ်ချီသီချင်း သံများ ပေါ်ထွက်လာသည်ကို သူတို့ ကြားရသည်။ မှန်သည်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမောင် ဦးဆောင်၍ တပ်မတော်မှ အာဏာသိမ်းယူ လိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။
ထိုညသည် သူ မမေ့နိုင်သော ညဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ်မီးများ ဖြတ်တောက်ထား၍ ရန်ကုန် တမြို့လုံး မှောင်အတိကျလျက်။ ည ကိုးနာရီ သာသာခန့်တွင် ဝုန်းခနဲ ဒိုင်းခနဲ မြည်ဟီးပေါက်ကွဲ သံကြီးများကို သူ ကြားရသည်။ သူ ကြားဖူးနေခဲ့ ပြီ ဖြစ်သည့် လက်နက်ငယ် ပစ်ခတ်သံမဟုတ်။ သူ တခါမှ မကြား ဖူးသော အသံကြီးများ (ထိုညက ရန်ကုန်မြို့လယ် တွင် နေထိုင်ခဲ့သူများ မှတ်မိလိမ့်ဦးမည် ဟု သူ ထင်သည်)။ ခြောက်သည့် လှန့်သည့် သဘောဖြင့် အသံသက်သက် ထွက်အောင် ပြုလုပ်သည်လား။ ဒါကိုတော့ ယနေ့တိုင် သူ ဝေခွဲမရ။ နောက် သူ ထပ်ကြားရသည်က သူ့ ရပ်ကွက်မှ ကင်းသမားတို့၏ ကြွေးကြော်သံများ။ "နှစ်ယောက်ကျရင် လေးယောက်တက်မယ် လေးယောက်ကျရင် ရှစ်ယောက် တက်မယ်" စသဖြင့်။ နောက်တနေ့ (စက်တင်ဘာ၁၉) တွင်တော့ ဆန္ဒပြ စစ်ကြောင်းများကို စစ်တပ် မှ အပြင်းအထန် ပစ်ခတ်နှိမ်နင်း တော့သည်။ တနေ့လုံး ပစ်သံခတ်သံ များကို သူ့ အိမ်မှ အတိုင်းသား ကြားနေခဲ့ရလေသည်။ အသံကျယ်ကျယ် မြည်ဟိန်းသော ဂျီသရီးသံ၊ တဖောက်ဖောက် အသံသာ မြည်သော ကာဘိုင်သံ အစရှိသဖြင့် သူ ကြားနေရသည်မှာ မိုးချုပ်သည် အထိဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် ညဘက်တွင်တော့ သူ့ လမ်းထဲသို့ စစ်ကားတစီး ဝင်လာသည်။ ဝှက်ထားသော လက်နက် များ ရှိပါက အပ်နှံရန် နှင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိ ပါက ပစ်သတ်ခံရမည် ဖြစ်ကြောင်း ကို အသံချဲ့စက်နှင့် ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ပြောတာ သူ မှတ်မိသည်။ သည်အသံကို ကြားတော့ အမေက အရေးတော်ပုံ အတွင်း သူ နေ့စဉ် ဝယ်ယူစုဆောင်း ထားခဲ့သည့် ဂျာနယ်များကို ရေစည်ပိုင်းထဲ ထည့်ဝှက်သည်။ သူ သိမ်းဆည်း ထားသော သမိုင်းမှတ်တမ်းများ ထာဝရ ပျက်စီးသွားရတော့သည်။
သူ့ အတွေးစ တွေကို ဖြတ်တောက်လိုက်တော့ ၁၂ နှစ်သား အရွယ် ချာတိတ်ကလေးက ၃၂ အရွယ် လူလတ်ပိုင်း တဦး ဖြစ်သွားသည်။ နှစ်နှစ်ဆယ် တိုင်ခဲ့ပြီပဲ….အခုတော့…။ သည် နှစ်နှစ်ဆယ် အတွင်း မှာလည်း ဇာတ်ကွက်ဇာတ်လမ်း အခန်းခန်း ကို သူ ဖြတ်သန်းတွေ့ကြုံ ခဲ့ရသည်။ တခုပဲရှိတာက သူ က ပွဲကြည့် ပရိသတ်မဟုတ်။ ကိုယ်တိုင် ပါဝင် သရုပ်ဆောင်သူ ဖြစ်နေခဲ့ တာပဲ ဖြစ်သည်။ သူ အပါအဝင် ပြည်သူလူထု ကြီးတရပ်လုံး။ သြော်…အနှစ်နှစ်ဆယ် တောင်တိုင်ခဲ့ပြီပဲ။ သည် အနှစ် နှစ်ဆယ်အတွင်းတွင် အခြေခံ ကျောရိုး မခိုင်မာသူ တို့ကိုလည်း သူ ဒုနှင့်ဒေး တွေ့ခဲ့ရသည်။ အသွေး အရောင် ဖြူသွားဖျော့သွား သူတို့ကလည်း မရှား။ တဖက်တွင်လည်း အာဇာနည် တို့က ကြံကြံခိုင်ခိုင် ရပ်မြဲ ရပ်တည်လျက်။ အသစ်အသစ် မွေးဖွားလျက်။ သည် အနှစ်နှစ်ဆယ် က လူ့စည်း/ ဘီလူးစည်း ကို ပိုင်းခြားပေးခဲ့ လေသည်။ သမိုင်းက ဆန်ကာတိုက်ချခြင်း…။ သူကတော့ သည်လိုပဲ ခေါ်ဝေါ် သတ်မှတ်မိသည်။ အာဏာပိုင် တို့ဘက်ကလည်း ရှစ်ဆယ့်ရှစ် အရေးတော်ပုံ ၏ အခန်းကဏ္ဍ ကို ဖျောက်ဖျက် ပစ်ရန် တရံမလပ် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်။ သို့သော် အရေးတော်ပုံ ၏ ဂုဏ်သိမ်က သေးသိမ် မသွား။ အရေးတော်ပုံ ၏ ဝိညာဉ်က မှေးမှိန်မသွား။ လူထုအင်အား ဖြင့်သာ အရေးတော်ပုံ က ညွှန်ပြ ခဲ့သော ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေး ပန်းတိုင်ဆီ အရောက်ချီရန် ပြည်သူလူထု တရပ်လုံးက ပိုင်းဖြတ် ထားပြီး ဖြစ်သည်။ အမျှော် ကိုသော်လည်းကောင်း၊ အကြောက် ကိုသော်လည်းကောင်း အပြီးတိုင် ဖယ်ရှားပစ်ရန် သန္နိဋ္ဌာန် ချထားပြီး ဖြစ်သည်။ အရေမပျော် အရောင်မပြောင်း၊ ပတ္တမြား မှန်လျှင် နွံမနစ်။ စင်စစ် အာဏာရှင်စနစ် တစ်ရပ် ကို ဖြိုဖျက်ခြင်း ဟူသည် သူ ငယ်ငယ်က ဖတ်ဖူးခဲ့သော "တောင်ဖြိုခြင်း" ပုံပြင် နှင့် အလားသဏ္ဍာန်တူသည် ဟု သူ ခံစားရသည်။ အဖိုးမှသည် အဖေ၊ အဖေ မှသည် သား။ တစ်နေ့တစ်လံ ပုဂံ ဘယ်ရွေ့မလဲ….။ အဆုံးတစ်နေ့ တွင်တော့ တောင်က မုချ ပြိုရ ပေလိမ့်မည်။ သူတို့ ဆင်နွှဲ ခဲ့သမျှ တိုက်ပွဲ တိုင်းက တောင်ကို ဖြိုသည့် ပေါက်တူးချက်များ….သူတို့ ပေးလှု ခဲ့သမျှ အသက်တိုင်းက တောင်ကို ဖျက်သည့် တူရွင်းချက်များ….။ သူကတော့ သည်သို့ပဲ ယုံကြည် နေမိသည်။ ယုံကြည်ချက် နှင့် တဆက်ထဲတွင် စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့ ညနေက ကျဆုံး သွားခဲ့ရရှာသော ညီမလေး ဝင်းမော်ဦး ၏ မျက်နှာနုနုကလေးကို သူ ကွက်ခနဲ မြင်ယောင် လာသည်။ ထာဝရ အသက်ကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြပြီ ဖြစ်သော ညီမလေး ဝင်းမော်ဦး နှင့်တကွ အာဇာနည် များ၊ ဒီမိုကရေစီ ရမှ အမျှဝေပါ ဟု မှာကြားသွားခဲ့ ကြသော တိုင်းပြည်အတွက် စွန့်လွှတ်သွားကြ သူများ၊ သွေးရဲရဲ သံရဲရဲ….လမ်းပေါ်တွင် ပြန့်ကြဲ နေသော ဖိနပ်ကလေးများ……။ သည် ဖိနပ်ကလေး များ၏ ပိုင်ရှင် ပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံး ကတော့ သူတို့ လိုလားတောင့်တရာ လွတ်လပ်ရေး ပန်းတိုင် ဆီ တစ်နေ့ မုချ ရောက်ရ ပေလိမ့်မည်။ သူတို့ခွန် သူတို့အား ဖြင့် သူတို့ပြည် သူတို့ရွာ ကို အသစ် တဖန် ပြန်လည် တည်ဆောက် နိုင်ကြ ပေဦးမည်။ သည်သို့ပင် သူ ခိုင်ခိုင်မတ်မတ် ယုံကြည်နေမိ သည်။ နောင်တွင်လည်း ယုံကြည်နေလိမ့် ဦးမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ။
ရည်ညွှန်းကိုးကား။ ။ ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံ ဖြစ်ရပ်များ ပြက္ခဒိန်၊ ကိုယ်ပိုင်မှတ်စုများ